Izichumisi ezichasene nokuwohloka komhlaba | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 17/05/2022 19:25 | Yendalo
Ulimo lunyusile ukusetyenziswa kwezichumiso zemichiza kule minyaka idlulileyo ukuze kuhlangatyezwane nemfuno emandla yokutya ngabemi. Ingxaki ngezi zichumisi zemichiza kukuwohloka komhlaba okubangelwa kuko. Ukuze kupheliswe ezi ngxaki, i biofertilizers. Ezi zichumisi zendalo zizama ukunciphisa impembelelo yokusingqongileyo kwezolimo, zinqanda ukuwohloka komhlaba nokuphucula umgangatho wawo.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zisetyenziswa njani izichumiso zebhayoloji ngokuchasene nokuwohloka komhlaba kwaye zeziphi iingenelo ezinazo kunezo zesintu.
1 Izichumisi zebhayoloji ngokuchasene nokonakaliswa komhlaba
3 Izinto eziluncedo kwi-biofertilizers
4 Umahluko ophambili
Ukuthotywa komhlaba yingxaki enkulu nekhulayo ebangelwa kukusetyenziswa kwakhona, ulawulo olulambathayo kunye nokuxhatshazwa ngokungekho ngqiqweni kobutyebi bendalo. Kuqikelelwa ukuba ngaphezu kwe-70% yomhlaba welizwe wonakele ngokwasemzimbeni, ngokwemichiza okanye ngokwebhayoloji Ngenxa yezolimo ezinzulu, ukusetyenziswa ngokungafanelekanga kwezixhobo zezolimo, ukususwa kweentsalela zezityalo kunye nokungabikho kwezichumisi eziphilayo, umhlaba wawo uwohloka imihla ngemihla.
Ezona ngxaki ziphambili ekuthotyweni kwalo mthombo wendalo zinxulumene nokukhukuliseka, ukufakwa kwetyuwa ekutyeni kunye nokunciphisa izitokhwe zezinto eziphilayo, ngokunjalo ukuxinana okubangelwa kukutyalwa ngokugqithisileyo koomatshini bezolimo. Oku kuthetha ukuba kukho ingxaki yokuwohloka komzimba. Iinkqubo zemveliso yezolimo zineempembelelo ezibalulekileyo kokusingqongileyo, imisebenzi kunye neentlobo-ntlobo zezinto eziphilayo zomhlaba. Ukuphazamiseka kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zezolimo kuye kwanciphisa kakhulu inani kunye nenani leentlobo zebhayoloji ezihlala apho.
Emva kokutshintsha kokusetyenziswa komhlaba kwi-ikhosistim yomhlaba, inani leentlobo zezityalo liyancipha kakhulu kunye nobungakanani kunye nomgangatho wemithombo yazo iyahluka ngeenkqubo ezahlukeneyo zeengcambu. Oku kubangela isiqulatho esisezantsi sezinto eziphilayo emhlabeni, nto leyo ethintela ukwahlukana kwezityalo emhlabeni kunye nokufumaneka kokutya.
Ngokusekelwe koku kungasentla, kukho imfuneko yokuphuhlisa ubugcisa obunokwandisa oovimba bomhlaba, ukulondoloza ukufuma komhlaba, ukuphucula ukusebenza kakuhle kokusetyenziswa kwesichumiso, nokunciphisa ukungcoliseka komhlaba namanzi. Uphononongo oluninzi lwenziwe malunga nokusetyenziswa kwezichumisi zendalo njengenketho yokuphucula iimeko zomhlaba kunye nokunyusa izivuno. Kuye kwagqitywa ukuba ukusetyenziswa kwe isichumiso sezinto eziphilayo ilungile kakhulu ukuphucula iimeko zomhlaba kunikwe ubungakanani bemicroorganisms abanazo.
Ii-Microorganisms zineendlela ezahlukeneyo zokuthi khuthaza ukukhula kwezityalo ngokusebenzisa i-rhizosphere symbiosis, eyona nto ibalulekileyo kukuba: ukusetyenziswa okwandisiweyo kwezondlo kunye namanzi, ukuqaliswa kwe-nitrogen kwi-plant-soil system nge-biofixation yi-bacteria ye-genus Rhizobium, njl.
Ezi zichumisi zebhayoloji zifumana umhlaba ngaphezu kwezichumiso eziqhelekileyo kuba iimpembelelo zokusingqongileyo zincitshiswe kakhulu. Ngombulelo ekusebenziseni i-microorganisms ekwazi ukuphucula iimeko zomhlaba kunye nomgangatho wayo, kunokwenzeka ukufumana ukuphuculwa kwezivuno zezityalo ngaphandle kwesidingo sokonakalisa umhlaba.
Izinto eziluncedo kwi-biofertilizers
Iingenelo eziphambili ezibonelelwa ngamayeza e-biofertilizer zezi:
Nciphisa ukusetyenziswa kwezichumisi zekhemikhali. Njengenye indlela kwizichumisi zekhemikhali, i-biofertilizers inefuthe elihle kwindalo ngokunciphisa ukusetyenziswa kwe-ammonia ekuveliseni izichumisi zemichiza, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwihlabathi.
Uphuhliso lwezityalo kunye nokugcinwa komhlaba. Ukusetyenziswa kwale microorganism kuthanda ukuchuma komhlaba kunye nezityalo, kuthintela ukhukuliseko kwaye kuthanda ukwakhiwa okuchanekileyo komhlaba.
Ukuphucula amandla esondlo kwizityalo. Ukusetyenziswa kolu hlobo lwesichumisi esiphilayo kunokunyusa ukufunxa kwezondlo zezityalo, ezifana ne-nitrogen, i-zinc okanye i-phosphorus.
Bavumela ukusetyenziswa kwenkunkuma ephilayo.
Isivuno sonyuka ngama-30%. Ukuphuculwa kokulondolozwa komhlaba kunceda ukuba izityalo zikhule ngcono ngamaxesha omileyo.
Amafama amaninzi awaqapheli iimpawu zokuvuselela i-biofertilizers xa kuthelekiswa neekhemikhali, ukudala iintsomi zobuxoki kunye nokukhanyela ukusetyenziswa kwazo. Izichumisi zemveli zongeza iikhemikhali kwindawo engqongileyo, ezifana nesinyithi esinzima esifumaneka kwisakhiwo sazo. Kwelinye icala, ukusetyenziswa okusengqiqweni kwezichumiso zendalo akunampembelelo imbi kokusingqongileyo kuba ukubunjwa kwayo akuqukethe izinto eziyingozi.
Ukongeza, ukusetyenziswa kwe-biofertilizers ithanda isenzo se-antiparasitic kwaye yandisa okanye ikhusela izityalo kwizinambuzane. Kwelinye icala, izichumiso ezenziwe ngemichiza zifak’ isandla ekubeni yintlango yaye zinokubangela ukulahleka komhlaba phantse ngokusisigxina. Ukwengeza, ukusetyenziswa kwe-biofertilizers kunceda ekuhlaziyweni komhlaba kunye nezityalo, apho izinto eziphilayo kunye ne-microorganisms zinokulungisa izondlo kunye nokuphucula isakhiwo somhlaba.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokusetyenziswa kwezichumisi zezityalo nezilwanyana ngokuchasene nokuwohloka komhlaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Izichumisi zebhayoloji ngokuchasene nokonakaliswa komhlaba